INCC : nahazo traikefa ireo niofana tamin’ny OMC | NewsMada
INCC : nahazo traikefa ireo niofana tamin’ny OMC
Vita, omaly, ny fiofanana nomen’ny teknisianina roa lahy avy amin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra (OMC), etsy amin’ny Sekolim-pirenena misahana ny varotra sy ny fifaninanana (INCC) etsy 67 ha. Nahatratra 40 ireo mpandray anjara, nahitana mpianatra andiany faharoa amin’ny fiofanana maharitra (cycle long) amin’ny lafiny varotra, ny mpampianatra sy ny mpitantana ao amin’ny INCC.
Nambaran-dRandriamananjara Daniel, mpampianatra taranja varotra iraisam-pirenena ao amin’ny INCC sy eny amin’ny oniversite, fa zava-dehibe ity fiofanana azon’izy ireo ity, satria, nahafahana mahafantatra ny lalam-pihariana tokony hampiroboroboana (chaîne de valeur) eto Madagasikara, ary hitondra tombontsoa hafa (valeur ajoutée). Santionany noraisiny ny famokarana vovoka lavanila, ohatra, fa tsy tokony hionona amin’ny fanondranana lavanila masaka fotsiny any ivelany.
Nanamafy izany i Fy Miandra Tantely, mpianatra ao amin’ny INCC. Traikefa azony tamin’ireo mpampiofana avy amin’ny OMC, ny fahafantarana ireo dingana samihafa arahina amin’ny tontolon’ny varotra iraisam-pirenena. Nisy antsipiriany nohadihadiana na nakana ohatra. Ho azy, faniriany ny ho mpandraharaha ara-toekarena amin’ny lafiny fambolena. Tsy mionona amin’ny lafiny varotra fa na ny famokarana na fanodinam-bokatra koa aza. Eo koa ny fikarohana lalam-barotra hafa fa tsy voatery ny efa misy sy mahazatra ihany.
Ho an-dRtoa tale jeneralin’ny INCC, Ravelosaona Victorine, tratra ny tanjona. Nampiavaka ity fiofanana ity ny nahalalana ny tontolon’ny varotra iraisam-pirenena amin’izao vanim-potoana izao, fa tsy ankapobeny fotsiny. Hitohy ity fiaraham-miombon’antoka amin’ny OMC ity, ary tena manan-danja satria tsy mora ny ahazoana manafatra teknisianina ambony toy izao ho avy aty Madagasikara.